ကိုယ့်အတွေးနဲ့ ကိုယ်ပေါ့နော် ( Little Singapore) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » ကိုယ့်အတွေးနဲ့ ကိုယ်ပေါ့နော် ( Little Singapore)
ကိုယ့်အတွေးနဲ့ ကိုယ်ပေါ့နော် ( Little Singapore)
Posted by ကထူးဆန်း on Feb 1, 2012 in Critic | 13 comments
၃၁-၁-၁၂ နေ့က စင်္ကာပူပြန်သည့် သူငယ်ချင်း အား မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ် ပို့ပြီး အပြန် ပြည်လမ်း ၈မိုင်ရှိ IT လ္ဘက်ရည်ဆိုင် သို့ အ၀င် ထွန်းမင်း နှင့် ပက်ပင်းသွားတိုးသည် ။ ဒီကောင်ကြီးနှင့် မတွေ့တာကြာပြီ။ သူက ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္မဏီ တစ်ခုတွင် သူဌေး လူယုံ အဖြစ် အလုပ်လုပ်နေသူ ။ သူ့သူဌေးကလည်း ပေါက်ရောက်သူ တစ်ဦး ဖြစ်သောကြောင့်သူနှင့်တွေ့လျင် အမြဲတန်းစိတ်ဝင်စားစရာများကြားရလေ့ ရှိသည် ။ သူဌေး လူယုံဖြစ်နေသော်လည်း ဘယ်တော့မှ နှုတ်မလုံ ။ သိသမျှ ကြားသမျှကို အာဘောင်အာရင်းသန်သန်ဖြင့် ပြောတတ်သူ ။ တစ်ယောက်ထဲထိုင်နေသော သူကလည်း တွေ့တွေ့ခြင်းဝမ်းသာအားရ လှမ်းခေါ်သည် ။
ထွန်းမင်း ။ ဟေ့ကောင် ကြီး ထူးဆန်း တစ်ယောက်ထဲလား ၊ဘယ်က မျက်စိလည်လာလည်း။
ထူးဆန်း ။ တစ်ယောက်ထဲဘဲ မင်းမြင်တယ် မဟုတ်လား ။ အဲ့ဒါ တစ်ယောက်ထဲပေါ့ကွ။ မင်းငြိမ်းချမ်း သိတယ်မဟုတ်လား ။ သူ့ကို လေယာဉ်ကွင်း ပို့ ပြီးပြန်လာတာကွ။ မင်းကော ။
ထွန်းမင်း ။ ငါလည်း ဘောစိ နေပြည်တော် သွားလို့ လေယာဉ်ကွင်းပို့ပြီး ပြန်လာတာ ကွ ။ နေပါဦး ငြိမ်းချမ်းဆိုတာ စကာင်္ပူရီယံကြီးလားကွ ။ ဒီကောင် စင်္ကာပူနိုင်ငံသားခံလိုက်တာ မကြာသေးဘူးဆို ။ ဘာလည်း ရန်ကုန်ပြန်လာလည်တာလား။
ထူးဆန်း ၊။ အေးလေကွာ .. ဒီကောင်ပေါ့ ။ သူ့ကုမ္မဏီ က ကိစ္စနဲ့ ရန်ကုန်လာပြီး ဒီနေ့ ပြန်သွားတာ ။ မပြန်ချင်ဘူးလုပ်နေတယ်လေ။ သူစလုံးသားခံလိုက်တာ နဲနဲစောသွားလားမသိဘူးပြောနေတယ် ။ မြန်မာပြည်ကြီး ပြောင်းလဲတော့မယ်ဆိုတော့ ပြောင်းလဲရင် ဒီမှာဘဲပြန်လာ လုပ်ချင်တယ် ပြောနေလို့ကွ။ ဒါနဲ့ မင်းဘောစိက နေပြည်တော် ဘာသွားလုပ်တာလည်း ။ အရင် ကားနဲ့ဘဲသွားနေကျ ကဘယ်လိုဖြစ်ပြီး လေယာဉ်နဲ့ ပြေးတာလည်း ။
ထွန်းမင်း ။ တင်ဒါသွားတင်တာလေကွာ ။ ဒီနေ့ နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်လို့ အသည်းအသန် လေယာဉ်နဲ့ ပြေးလေရဲ့။ ဒို့မြို့တော်ရဲ့ သမိုင်းတရားခံ ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ အပြေး သွားလေရဲ့။
ထူးဆန်း ။ မင်းဟာက အဆန်းပါလား ။ တင်ဒါနဲ့ မြို့တော် သမိုင်းတရားခံနဲ့ ဘာဆိုင်လို့လဲ ။ ဘာလဲ ရန်ကုန်မြို့ မှာကော ဆည်တွေ ဆောက် ၊ ကျောက်မီးသွေး လျှပ်စစ်ထုတ်စက်တွေ ဆောက်မလို့ လား .. ဟား ဟား
ထွန်းမင်း ။ နောက် သလိုနဲ့ အတည်ပြောတာ သူငယ်ချင်းရေ။ ဆည်ဆောက်မလို့ တော့မဟုတ်ဘူး ။ မြို့တော် အကျည်းတန် ဖြစ်အောင် သွားလုပ်မလို့။
ထူးဆန်း ။ ဟင်.. ဘယ်လို … ပြောစမ်းပါဦး ။
ထွန်းမင်း ။ နေစမ်းပါဦးကွာ ။ လ္ဘက်ရည် သောက်ပါရစေဦး ။
ထူးဆန်း ။ ဟေ့ကောင် မင်းသောက်ကျင့် မရုပ်နဲ့ ။ စိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ပြီး မှ ပဲလာများမနေနဲ့ ။ မပြောချင်နေ ။
ထွန်းမင်း ။ ဟား ဟား မင်းကတော့ စိတ်ကြီးဘဲ ။ ပြောမှာပေါ့ကွာ .။ ပြောချင်လွန်းလို့ အူယားနေတာ ။ ပြောဦးမှာ ။ပြောဦးမှာ ။ ဒီလိုကွ ။ ဒီနေ့ စစ်ထောက်ချုပ်ရုံးက မြေတွေ တင်ဒါလေလံတင်ရမှာ နောက်ဆုံးနေ့လေ။ အဲ့ဒီထဲက အရင် နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေး တက္ကသိုလ် နေရာ နဲ့ မော်တော်ယာဉ် တပ်ရင်း (၁) နေရာ ပါတယ် ကွာ။မင်းသိလား ။ အဲ့ဒီ့နေရာက တိရစ္ဆာန်ရုံနားကလေကွာ ။ အဲ့ဒါ ငါ့ ဘောစိ ငှါးဖို့ တင်ဒါသွားတင်တယ် ကွ။
ထူးဆန်း ။ အဲ့ဒါနဲ့ မင်း ဘောစိက သမိုင်းတရားခံ ဖြစ်ရောလားကွ ။ ကောင်းအောင် လုပ်မှာ မဟုတ်ဘူးလား။
ထွန်းမင်း ။ လောမကြီးနဲ့ ။ ငါပြောပြမယ် ။ သိတယ်မဟုတ်လား ။ ဒီခောတ် ဘောစိတွေလေ ။ သူတို့ အတွက် ကလွဲရင် ဘာ မှ ကြည့်တာမဟုတ်ဘူး ။ လူကြားကောင်းအောင်သာ တိုင်းပြည် ချစ်ပါတယ် အော်ပြနေတာ ။ အခွင့်အရေးရရင် ဘယ်လိုယူရမလဲကြည့်နေတာ။ ဖြစ်သင့်တာ သိလည်း သူတို့အတွက် မဟုတ်ရင် ဘာမှ မကြည့်ဘူး ။
ထွန်းမင်း ။ အဲ့ဒီနေရာ ကြီးကကွာ ရှယ်ကောင်းတာ။ အခု အကွက်သုံးကွက် တင်ဒါခေါ်တယ် ။ တစ်ကွက်က ၉ ဒသမ၀၁၅ ဧက ၊ တစ်ကွက် က ၂၁ ဒသမ၉၂၅ ဧက ၊ နောက်တစ်ကွက် က ဧက ၂၂ ဒသမ၀၃၂ ရှိတယ်ကွား ။ သုံးကွက်ပေါင်းရင် ဧက ၅၂ လောက်ရှိတယ် ။
အဲ့ဒါ တပ်မြေရဲ့ တစ်ခြမ်းဘဲ ရှိသေးတယ် ။ နောက် ကျန်တစ်ခြမ်းသာပေါင်းလိုက်ရင် ဧက၁၀၀ လောက်ရှိမယ် ။ မြို့နယ်တစ်ခုစာလောက်ဖြစ်နေပြီ။ အဲ့ဒီနေရာမှာ ကွာ သေသေခြာခြာ စီမံကိန်းနဲ့ လုပ်လိုက်ရင် ငါတို့ သမ္မတကြီးပြောတဲ့ စကာင်္ပူ လေး တစ်စိတ်တစ်ဒေသ ဖြစ်မသွားဘူးလား။
ထူးဆန်း ။ မင်းကလည်းကွာ ။ ငါတို့ မြေတွေ ဒီလောက်ပေါတာ ။ အဲ့ဒီ ဧက ၁၀၀ မှာမှ သွားလုပ်ရမှာလားကွ ။ တစ်ခြားတောင်ဒဂုံ မြောက်ဒဂုံတွေ သွားဆောက်ပေါ့ကွ ။ ရန်ကုန်မှာမှဆောက်ခြင်တယ်ဆို ။
ထွန်းမင်း ။ ရော် တယ်ဒုံးဝေးပါလား ငါ့ကောင်ကြီး ထူးဆန်းရ ။ အဲ့ဒါ နေရာကကွာ တစ်ဘက်က ရွှေတိဂုံ ဘုရားလမ်း ၊ တစ်ဘက်က ဦးထောင်ဗိုလ်လမ်း ၊ တစ်ဘက် က တိရစ္ဆာန်ဥယာဉ် လမ်းကွာ ။ ရွှေတိဂုံ ဘုရားကြီးနဲ့ လည်း မနီးမဝေး ။ မြို့လည်နဲ့ လည်း မနီးမဝေး ။ မင်းဟာမင်း မြေကြီးက ကြိုက်သလောက်ရမယ် ။ ရွှေတိဂုံဘုရားကြီး က ကြိုက်သလောက်မရဘူးကွ ။ ကမ္ဘာကျော် မြန်မာတွေ အထွဋ်အမြတ်ထားတဲ့ နေရာ နား မှာ ရှိမှာ ။ အဲ့ဒီ ဗျုးမျိုးက ဘယ်နားသွားရှာမှာလဲ ငါ့ကောင် ရ ။ ရန်ကုန်မှာ ဒါထက်ကောင်းတဲ့ နေရာမရှိတော့ဘူး။ စင်္ကာပူ က အောချလမ်းလို့ ဆောက်လိုက်ရရင်ကွာ … စလုံးတွေ အောချသွားမယ် ။
ထူးဆန်း ။ အောချတ်လမ်းပြောစမ်းပါကွ ။ မင်းကလည်း ။ ပိန်းလိုက်တာ။
ထွန်းမင်း ။ အဟီး … အေး ဟုတ်တယ်… အောချတ် တို့ ၊ ချိုင်းနားတောင်းတို့လို ဆောက်လိုက်ရရင်ကွာ .. မသေခင် ကြွားသွားနိုင်တာပေါ့ကွာ ..
ထူးဆန်း ။ နေစမ်းပါဦး ။ မင်းကလည်း ။ ဒါ အခု လေလံ ဆွဲတဲ့ သူတွေလည်း သူ့ ရတဲ့ အကွက် သူ တို့ အဲ့ဒီလို ဆောက်ခြင် ဆောက်မှာပေါ့ကွ။
ထွန်းမင်း ။ အဲ့ ဒါကြောင့် မင်းကို ဥာဏ်ရည်နိမ့်တဲ့ကောင် ။ ငပိန်းလို့ ခေါ်တာ သိလား ။ မျက်တောင်တစ်ဖျားဘဲမြင်တယ် ။ မျက်စိတစ်ဆုံးမမြင်ဘူး ။
ထူးဆန်း ။ ဟေ့ကောင် ဘာမှ မဆိုင်ဘူး ။ မင်းတို့ ဘောစိတွေလည်း ဆောက်မှာပေါ့ကွ။
ထွန်းမင်း ။ ငါပြောပြီးပြီ ။ သူတို့ က သူတို့ အတွက်ဘဲကြည့်တာ။ သူတို့ ဘယ်လို အမြတ်ရအောင်လုပ်ရမလဲဘဲ ကြည့်တာ။ တိုင်းပြည်မျက်နှာ သိပ်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူး ။ မင်းတို့ငါတို့သာ အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ချစ်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့ မွဲနေတာ ။ မင်းစဉ်းစားကြည့်စမ်း ။ ငါ့ ဘောစိက တကွက်ရမယ် ။ မင်းဘောစိက တစ်ကွက်ရမယ် ။ ပြည်သူ့ အချစ်တော် ဟို အာလူးကြီးက တစ်ကွက်ရမယ် ဆိုပါတော့ ။ သူတို့ဘာလုပ်မလဲ ။ တစ်ကယ်တန်းပြောရင် သူတို့ လည်း လုပ်စရာ ဒီလောက် အရင်းအနှီး ရှိတာမဟုတ်ဘူး ။ အဲ့ဒီတော့ အဖြစ်ဆောက်ပြကြမယ် ။ ရသမျှနေရာ တစ်ပေရရ ၊ တစ်လက်မရရ ။ ရတဲ့ နေရာ ရောင်းစားလို့ ရအောင်လုပ်မယ် ။ အဲ့ဒီတော့…
ထူးဆန်း ။ အေး ရေးရေးတော့မြင်လာ ပြီ။ တွေးကြည့်လိုက်ဦးမယ် ။
ထွန်းမင်း ။ တွေးစမ်းပါ ။ တွေးစမ်းပါ ။
ထူးဆန်း ။ အေး ဟုတ်ပြီကွ ။ အဲ့ဒီတော့ ရတဲ့ သူ က ရတဲ့ သူ့ အကွက်ထဲမှာ လမ်းဆိုလည်း သွားလို့ ရယုံသာဆောက် ။ မြောင်းဆိုလည်း ရေ စီးယုံလေးသာ ဖောက် ။ ပလက်ဖောင်းမရှိတဲ့ လမ်း ။ ပန်းခြံမရှိတဲ့ နေရာ။ သံလွင်လမ်းက လမ်းကြားမြှောင်လေးတွေလို မြို့လည်မှာ ပေါ်လာနိုင်တာပေါ့ ။
ထွန်းမင်း ။ အေးပေါ့ ကွ ။ ငါ့ကောင်ကြီးတော်လာပြီ။ အဲ့ ဒါပါဘဲကွာ ။ဒါကြောင့် မြို့တော်ကို ဖျက်ဆီးဖို့၊ အကျည်းတန်အောင်လုပ်ဖို့၊ သမိုင်းတရားခံဖြစ်အောင် လုပ်ဖို့ သွားတယ်ပြောတာပေါ့ကွ။
ထူးဆန်း ။ မင်း ဘောစိက မသိဘူး လား ။
ထွန်းမင်း ။ ပြောပြီးပါရောလားကွာ ။ သူတို့ က သူတို့ အတွက်ဘဲ ကြည့်တာပါလို့ ။ မြင်လည်း သူတို့အတွက်ရ ပြီးတာဘဲ ဆိုပြီး ။
ထူးဆန်း ။ နေဦးကွ ။ ဒါက စစ်ထောက်ချုပ်ရုံးက ငှါးဖို့ တင်ဒါခေါ်တာဆိုတော့ သူတို့ ကော မမြင်ဘူးလား ။ သူတို့ လုပ်မှ ရမဲ့ ကိစ္စဘဲကွ။
ထွန်းမင်း ။ စစ်ထောက်ချုပ်ရုံးကတွေးမိ မမိတော့ ငါလည်းမသိဘူးကွ။ ဟဲဟဲ ကိုယ့်အတွေးနဲ့ ကိုယ်လေကွာ။ မင်းဘဲ ပြောပြောနေပြီး ။
ထူးဆန်း ။ ဒါဆိုဘယ်လိုဖြစ်သင့်လည်းကွ။
ထွန်းမင်း ။ ဖြစ်သင့်တာတော့ကွာ ၊ စစ်ထောက်ချုပ်ရုံးကနေ ဖြစ်နိုင်ရင် အခု တစ်ဝက်ဘဲ မဟုတ် ။ တစ်ကွက်လုံးကို Town Planning ပညာရှင်တွေကို အပ် ။ သေသေခြာခြာ လမ်းက ဘယ်မှာ ။ လမ်း အကျယ်က ဘယ်လောက် ။ ဘယ်နေရာမှ က အထပ်နိမ့် ဆောက် ။ ဘယ်နေရာက အထပ်မြင့် ဘယ်လောက်ဆောက်။ ဟိုတယ် က ဘယ်နေရာ ။ ရှော့ပင်းစင်တာ က ဘယ်နေရာ ။ အနားယူစရာ မြေကွက်လပ် ကဘယ်နေရာ။ နောင် MRT ဆောက်ရင် ရအောင် ဘူတာရုံအတွက် က ဘယ်နေရာ စသဖြင့် သေသေခြာခြာ ဆွဲပြီးမှ သူတို့ ပေးတဲ့ နေရာမှာ လိုခြင်တဲ့ အခြေခံ ဒီဇိုင်းနဲ့ ဆောက်ရမည်ဆိုပြီး ပုဂ္ဂလိက တွေကို ပြန် တင်ဒါခေါ် ၊ ဆောက်ဆိုရင် တော့ ဒို့ သမ္မတ ကြီးပြောတဲ့ စကာင်္ပူ ပုံစံလေး စောစောစီးစီး တစ်ကွက်ရမယ်ကွာ ။ နောက် တော့လည်း တတ်နိုင်ရင် တတ်နိုင်သလောက် Town Planning အရ အခြားနေရာများမှာလည်း ပြောင်းပြောင်းသွားပေါ့ကွာ ။။ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောရရင် မြေ ဒီအတိုင်းဘဲ ရောင်းစားတာမဟုတ်ဘဲ value added လုပ်ပြီး မှ ရောင်းတာပေါ့ကွာ။
အခု ဒီအတိုင်းပေးလိုက်လို့ကတော့ ဗြုတ်စဗြင်းတောင်း ဖြစ်သွားမယ် သူငယ်ချင်းရေ.
ဟူး ရင် မောလိုက်တာ ။
ထူးဆန်း ။ အင်း မင်းလည်းကိုယ့်အတွေးနဲ့ ကိုယ်ကို ကွ ။ အဲ့ဒီလိုဘဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ် ကွာ ။ လေလံ ခဏရပ်ပြီး ပြန်စဉ်းစားသင့်တယ် ထင်တယ်ကွ။
ွထွန်းမင်း ။ တစ်ခြား အကွက်တွေကို ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကွာ ။ အဲ့ ဒိ့ အကွက်ကြီးကိုပါဘဲ ။ Little Singapore လေးဖြစ်ချင်တယ်ကွာ သူငယ်ချင်းရေ။ စစ်ထောက်ချုပ်ကြီးရယ် ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လိူင်ရယ် တစ်ချက်လောက် ပြန်စဉ်းစားပါဦးလို့ ပြောချင်တယ် ။ Little thought mean so much တဲ့.။ ဟဲဟဲ ကိုယ့်အတွေးနဲ့ ကိုယ်ပေါ့ကွာ ။။။။။။။။။။။။ လ္ဘက်ရည် ဖိုးပေးပြီးသွားပြီ လစ်ပြီဟေ့။
သူတို့ ဟာနဲ့ သူတို့ တော့ ဟုတ်နေတာဘဲ ။
ကွက်လပ်ဖြည့်ပါ လို့ ဘဲ မန့် ပါရစေ ခင်ဗျား ။
ကွက်လပ်ဖြည့်ပါ ဆိုတဲ့ဆေးကို ကိုပေသုံးနေတဲ့အတွက်
ကွက်လပ်ဖြည့်ပါလို့ မန့်ပါတယ်ဗျ ….
ကျွန်တော်ကတော့ ကယ်လ်ဆီယမ်ကွေကာပေါ့ဗျာ ….
ဟုတ်တယ် ကိုပေရေ.ကွက်လပ်လေးက မှန်အောင် ဖြည့်နိုင်မှ အဓိပ္မါယ် ပြည့်ဝမယ်လေ။။
မင်းကောင်ရေ .. မင်းကောင်ပြောချင်တာ မှန်တယ်ထင်တယ် .. အဲ့ဒီကနေ ဒီစကားလုံးနားထဲစွဲလာတာ ..TV ကြော်ငြာတွေမှာ အတော်ပျော်မွေ့တယ် ထင်တယ်နော့် .. :grin: ဘယ်သူ အားပေးသွားလည်းတော့ မသိဘူး နော် .. အနီနဲ့ မင်းကောင်ကို ချီးမြှောက်ပေးသွားတ ယ် … :grin:
အရီးလတ်ရေ .. ဘာဘဲပြောပြော ကျေးဇူးတင်တတ်အောင် ကြည့်ရင် လောကကြီးက ပိုပြီး ပျော်မွေ့စရာကောင်းလာ တာ အမှန်ပါ..
အားပေးသူ ဘဖော ၊မမ၊ awra-cho ။ ကောင်းမြတ်သူ ၊Shwe Tike Soe ၊Arkar11တို့ကို ကျေှးဇူးပါ။
ကိုထူးဆန်း ရေ – သေသေချာချာ တွေးပြီး ကိုဖတ်ခဲ့ပါတယ်။
ပြောရရင် အားလုံးက ကိုယ့်အိမ်မက် ကို မက်ကြည့်နေကြကြပါတယ်။
ဝမ်းနည်း စရာကတော့ – အခုလောလောဆယ်တော့ အများအတွက် စဉ်းစားပေးတဲ့ အိမ်မက်တွေက အကောင်အထည်ပေါ်တာ နည်းပြီး တစ်ဘို့ထဲ အတွက် အိမ်မက် တွေ က come true ဖြစ်နေဆဲ … :-(
အကောင်းမြင်စိတ် နဲ့ ဆိုရင်တော့ အိမ်မက်မက်လို့ ရခွင့် ရနေတာကို ဘဲ ကျေးဇူးတင်နေရသေး။
အဲဒီနေရာသတင်းကတော့ … ဟိုးအရင်ထဲ က မျက်စိကျနေသူတွေ အများကြီး …
အဝေမတဲ့လို့ ဘာမှမလုပ်ဘဲထားတာ ထင်ရဲ့။
Post လေးက အတွေးအခေါ်လေးရော ၊
အပြုသဘောဆောင် ထောက်ပြချက်လေးရော ပါတယ် ။
Bravo ပါ ကို htoosan ရေ ။
ကိုယ့်အတွေးနဲ့ ကိုယ်ပေါ့နော် ကိုထူးဆန်းရဲ့ ဘရန်းကတော့ ဂေဇက်ရဲ့ မျက်နှာစာမှာ လှပစွာ နေရာယူလာတာကို ဂုဏ်ပြုပါတယ်။
စာ ရေးကောင်းတဲ့သူတွေ ချီး (ချည်း)ပါပဲ လား။ အားပေးပါတယ်၊
ဆရာတရုတ်ကြီးဆီ ကနည်းပညာနဲ့မြို့ကွက်တစ်ကွက် (၁၅)ရက် စီမံကိန်းတွေများထွက်လာမလားပဲ။ စဉ်းစားကြ…….စဉ်းစားကြ………
အမလေး လေလံသွားစွဲတဲ့သူ ထက် တပည့်ဖြစ်နေတဲ့သူက Plan ဆွဲပြသွားတာ တော်တာ.. အဲဒီလူမျိုးကို ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီး ခံလိုက်လို.ကတော့ စင်္ကာပူကတော့ နေခဲ့တော့ပဲ နော… ဟဲဟဲ
တကယ်တန်း ပြောရရင် ပြောသွားတာကတော့ မြို.လယ်ခေါင်မှာ လုပ်စားကြတော့မယ်ပေါ့.. ရင်လေးစရာပါလား…
ဒီလိုပို့စ်မျိုးတွေတင်တာ သိပ်ကောင်းပါတယ်…ဒါမှ မဖြစ်သင့်တာတွေ မဖြစ်အောင်တားနိုင်မှာပါ…
သက်ဆိုင်ရာလူကြီးမင်းတွေ ဖတ်ဖြစ်ပြီး ဆင်ခြင်နိုင်ပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းပါတယ်… မနေ့က မဝေေ၀ ရေးခဲ့သလိုပဲ ဌာနဆိုင်ရာတွေမှာ တကယ်တတ်ကျွမ်းတဲ့လူတွေ မရှိသလောက် ဖြစ်ကုန်ပြီ….အခုလို ပြည်သူတွေက ထောက်ပြဝေဖန်မှ ပြုပြင်မှုတွေဖြစ်လာပါ…ရေးတဲ့သူကိုလည်း အားပေးပါတယ်…များများသာတင်ပေးပါ…
အားပေးပါတယ် ဗျာ။ လတ်တလော ဆို RC-2 ထဲက အဆောက်အအုံ တွေ အကြောင်းလေးလဲ ဆက် ပေးပါဦး။
လဘက်ရည်ဘိုးရှင်းပြီး ဆေးလိပ်ဘိုး ကျန်ခဲ့လို့လိုက်တောင်းတာပါခင်ည
ဖတ်ရင်းနဲ့လည်သွားလို့ …ဘာပေါရမှန်းတောင် တိဘူး အူးရေ
သများတို့ မမြင်နိုင်တဲ့..အချက်လေးတွေ ပြောပေးတယ်လို့ ပဲ..မှတ်၏
Mလုလင် ရေ RC2အကြောင်းတော့ ကျွန်တော်မသိဘူးဗျ။
ဆေးလိပ်ဖိုးတော့ ဘေးနားက လာခိုးနားထောင်နေတဲ့ စားပွဲထိုး စိန်ပေါက်ဘဲ ဆိုင်ရှင်စိုက်ရော်လိုက်တော့.. လစ်ပြီလေ … ခွစ် ခွစ် ခွစ် …. :grin: :grin: